“ကြၽန္မတို႔ လင္မယားက ဒလံ ဆိုရင္ အခုလို ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံရပါ့မလား႐ွင္ ” ဆိုၿပီးေျဖ႐ွင္းလာတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသု – Daily News
March 24, 2021 - by admm
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ… မင္းသမီးေခ်ာသ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံဟာဆိုရင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလပိုင္းကေနစၿပီး အခုခ်ိန္ထိတက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကသူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။လက္၇ွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တိမိးေရွာင္ေနရေပမယ့္လည္းေန႕စဥ္ရက္ဆက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေနတစ္ဆင့္ မွ်ေဝေပးေလ့ရွိပါတယ္.။အခုလိုတိမ္းေ၇ွာင္ေနတဲ့အေတာအတြင္းမွာလည္း သူမတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေကာလာဟာလမ်ားစြာထြက္ရွိေနတာေၾကာင့္ သူမရဲ႕Facebook အေကာင့္ကေနျပန္လည္ေျဖရွင္းေပျးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္….။
“ကျွန်မတို့ လင်မယားက ဒလံ ဆိုရင် အခုလို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပါ့မလားရှင် ” ဆိုပြီးဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောသရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကနေစပြီး အခုချိန်ထိတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။လက်၇ှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကြောင့် တိမိးရှောင်နေရပေမယ့်လည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက် သတင်းအချက်အလက်တွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်.။အခုလိုတိမ်းေ၇ှာင်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာလည်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟာလများစွာထွက်ရှိနေတာကြောင့် သူမရဲ့Facebook အကောင့်ကနေပြန်လည်ဖြေရှင်းပြေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ page နဲ့websiteမွာ ပိုင်ဖြိုးသုကပြောကြားလာပါတယ် ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့သတင်းတွေ့လိုက်လို့ပါ.သူရေးထားတာကလည်းတကယ်ကိုယုံလောက်စရာ အကွက်ကျကျဇာတ်လမ်းဆင်ရေးထားတာပါအခုဒီမွာအဲဒီ့interviewရဲ့linkကိုမထည့်ပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်မထည့်ပေးလိုက်မှအဲဒီ့pageအခုထက် reachကောင်းသွားမှာစိုးလို့ပါ.(လက်ရှိတောင်သူ့postကshare5.7K)ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေမယ့်ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးထားတာပါ
အဲဒီ့postအောက်မှာ ဝိုင်းဝန်းစွပ်စွဲပြောဆိုထားသူများကိုလည်းမေးချင်လို့ပါရှင်ကျွန်မတို့လင်မယားကဒလန်တွေဆိုရင် ဝရမ်းထုတ်ခံရပါ့မလား??? ကျွန်မတို့သာ အမှန်တရားဘက်ကမရပ်တည်ချင်ရင် အသာလေးရေလိုက်ငါးလိုက် ရေသာခိုနေကြမှာပေါ့ရှင်(အဲ့သလို နေနေကြသူတွေလည်းရှိနေတာပဲ)အများစိတ်ဆင်းရဲနေရချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခတွေမဝေမျှချင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခုတော့အတိအကျကျွန်မပြောပါရစေ
ကျွန်မပိုင်ဖြိုးသုသည် မည်သည့်အသွင်ပြောင်း mediaအတု pageအတုကိုမျှ interviewဖြေကြားထားခြင်းမရှိပါအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မှ ဝရမ်းပြေးဘဝအတွေ့ကြုံများဆိုပြီး တစ်ရက်သက်သက်ပြောပြရဦးမယ်. ဆိုပြီးလက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလဟာလသတင်းအတုတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေရန်အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်..။
Previous Article မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ ဖမ္းဆီးခံရ
Next Article ATM စက္ထဲ မေတာ္တဆ ကဒ္ဝင္သြားၿပီး ျပန္မထြက္ လာခဲ့ရင္ ခ်က္ျခင္းျပန္ရမယ့္ နည္းလမ္း